Himalaya Dainik » रवि लामिछाने हिरासत*बाट छुटे.,अब विदेश जान नपाउने.,अरु पनि लाग्यो यस्तो प्रतिबन्ध !
रवि लामिछाने हिरासत*बाट छुटे.,अब विदेश जान नपाउने.,अरु पनि लाग्यो यस्तो प्रतिबन्ध !
चितवन, ९ भदौ : शालिकराम पुडासैनीको आ त्म ह त्या दरु त्साहनको मु द्दा खेपिरहेका टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेले यसबारे कार्यक्रम चलाउन नपाउने भएका छन् । साथै उनले विदेश जाँदा अदालतको स्वीकृती लिनुपर्नेछ । जिल्ला अदालत चितवनमा थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले लामिछानेसँग ५ लाख, युवराज कँडेलसँग ३ लाख धरौटी माग गरेर रिहा गरेको हो ।
प्रकाशित मिति ९ भाद्र २०७६, सोमबार १६:०९